Cusboonaysiinta Kaararka Garaafka ee Fiidiyowga ah
Cusboonaysiinta Kaararka Garaafka ee Fiidiyowga ah Bilood 10 3 todobaad ka hor #1477
Waxaan danaynayaa inaan kor u qaado kaarkayga garaafka ah waxa aan hadda haysto taas oo ah in si dhexdhexaad ah loo qiimeeyo ($ 250- $ 350).
Qormadayda hadda socota waa sida soo socota:
Aaladda: Desktop - BVSMMEP
Processor: Intel (R) Core ™ i7 4790 CPU 3.60GHz 3.60 GHz
Xusuusta la rakibay (RAM): 16.0 GB
Nooca Nidaamka: Nidaamka Howlgalka 64-Bit X xNUMX processor
Qalin iyo taabasho: Ma jiraan Qalin ama taabasho la heli karo
Daabacaadda Windows: Windows 10
Kaarka sawirrada: NVIDIA GeForce GT 705.0
Waxba kama ogi kaararka garaafyada ee aan ka aheyn kaararka NVIDIA oo u muuqda kuwa ugu badan suuqa.
Ugu horreyn waxaan duulista FXE Steam (laakiin waan ogahay in MS FS 2020 uu jiro halkaas) oo aan raadinayo DSL si aan isugu dayo; Caadi ahaan waxaan duulaa dhowr saacadood asbuucii manaan galin ciyaaraha.
Waxaana u badali doona wiilkeyga sharciga ah kaarkeyga si taasi fikrad kaaga siiso (waxaan rajeynayaa) xirfadaheyga farsamada kumbuyuutarka (ama la'aan).
Cusboonaysiinta Kaararka Garaafka ee Fiidiyowga ah Bilood 10 2 todobaad ka hor #1478
Nividia 1080 (maaha 1080ti .... oo aad qaali u ah)
Kaarka heer sare ah. Dib-loo-hagaajiyay way fiicantahay. Heerka sicirkaaga.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray hankal. Sababta: ku dar qoraal
Cusboonaysiinta Kaararka Garaafka ee Fiidiyowga ah Bilood 10 2 todobaad ka hor #1480
Waxa aan ka baqayaa waa hoygaaga hooyo oo taageeraya nooca Vid Card. Si daacadnimo ah uma jecli inaan jeclahay PC-yada Dell. Waxaan lahaa 2 ama 3 markasta oo aan kor u qaadayay Kaararka Vid, Waxaan helayay Qalalaasa.
Aniga hadda waan dhisaa.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.297